အီတလီရှိနံပါတ်များမှ ၁ မှ ၁၀၀ အထိ UniProyecta
အီတလီသည်သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသည့်အလွန်ထင်ရှားသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘိဓာန်၏ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းကိုစပိန်ဘာသာနှင့်မျှဝေထားသောကြောင့်၎င်းသည်သင်ယူရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်ဟုထင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဘာသာစကားကိုသင်ယူသည့်အခါရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖန်တီးပေးနိုင်သောတူညီသောဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဖြစ်သည်။ အခြားဘာသာစကားများနည်းတူသင်ယူခြင်းဖြင့်စတင်ပါ အီတလီရှိနံပါတ်များ ၎င်းသည်စတင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အီတလီသည် Indo-European ဘာသာစကားမှ Romance ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည် italia y က es လူ ဦး ရေ ၆၂ သန်းပြောဆိုသည်မရ။ သင်သည်လအနည်းငယ်အတွင်းထိုနိုင်ငံသို့သွားရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိ၊ ၎င်းသည်သင်၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်သောကြောင့်ဘာသာစကားသင်ယူလိုစိတ်ရှိခြင်း၊ နံပါတ်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းရှိခြင်းသည်သင်ယူခြင်းနှင့်အသံထွက်ကိုလေ့ကျင့်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်သင်ယူမည်ဆိုလျှင်စိတ်ရှည်ရမည်၊ ဖြည်းဖြည်းသင်ယူပါ၊ လေ့ကျင့်ခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။
2 ကြောင့် dos
4 လေး လေး
5 cinque ငါး
6 ခြောက် ခွောကျ
7 နေ ခုနှစ်ခု
8 Otto ရှစ်
10 တကျိပ် ဆယ်
11 တကျိပ်တပါး တခါ
12 တကျိပ်နှစ်ပါး မြဝတီ
13 ။ ဆယ့်သုံး
14 quattordici တဆယ်လေး
15 ကျောက်တံတား သစ်ပင်
16 sedici ဆယ့်ခြောက်
17 diciasette ဆယ့်ခုနစ်
18 diciotto ဆယ့်ရှစ်
19 သူတို့က ဆန်းသစ်တယ်။ ဆယ့်ကိုး
20 ။ နှစ်ဆယ်
21 နှစ်ဆယ့်တစ် နှစ်ဆယ်
22 အကျိုးအမြတ် နှစ်ဆယ့်နှစ်
23 နှစ်ဆယ့်သုံး နှစ်ဆယ့်သုံး
24 နှစ်ဆယ့်လေး နှစ်ဆယ့်လေး
25 နှစ်ဆယ် နှစ်ဆယ့်ငါး
26 Venisei နှစ်ဆယ့်ခြောက်
27 ventisette နှစ်ဆယ့်ခုနစ်
28 ventotto နှစ်ဆယ့်ရှစ်
29 ventinove ဖြစ်သည် နှစ်ဆယ်ကိုး
31 ထရင်တူနို သံုးဆယ့်တစ်
32 ကြမ်းပြင် သုံးဆယ့်နှစ်
33 trentatre သုံးဆယ့်သုံး
35 trentacin ထက် သုံးဆယ့်ငါး
37 အသံဖမ်းစက် သုံးဆယ့်ခုနှစ်
38 ထရန်တိုတို သုံးဆယ့်ရှစ်
40 ရောဂါမကူးစက်စေရန်ခွဲထားသည့်အချိန်ကာလ လေးဆယ်
41 ရောဂါမကူးစက်စေရန်ခွဲထားသည့်အချိန်ကာလ လေးဆယ့်တစ်
42 သီးသန့်ခွဲထားသည်။ လေးဆယ့်နှစ်
43 သီးသန့် လေးဆယ့်သုံး
45 အဲဒါကို quarantacin လေးဆယ့်ငါး
46 quarantasei လေးဆယ့်ခြောက်
47 quarantasette လေးဆယ့်ခုနစ်
48 quarantotto လေးဆယ့်ရှစ်
49 quarantanove ဖြစ်သည် လေးဆယ့်ကိုး
50 မင်းကွန်း ငါးဆယ်
51 ငါးဆယ့်တစ် ငါးဆယ့်တစ်
52 ငါးဆယ်ပေးရသည်။ ငါးဆယ့်နှစ်
53 ငါးဆယ့်လေး ငါးဆယ့်သုံး
54 ငါးဆယ့်ငါးလေးထရို ငါးဆယ့်လေး
56 ငါးဆယ်ငါးဆယ် ငါးဆယ့်ခြောက်
57 ရုပ်ရှင်ရုံ ငါးဆယ့်ခုနစ်
58 စင်ကွမ်တိုတို ငါးဆယ့်ရှစ်
61 sessantuno ခြောက်ဆယ့်တစ်
62 sessantadue ဖြစ်သည် ခြောက်ဆယ်နှစ်
63 နှမ်း ခြောက်ဆယ့်သုံး
64 sessantaquattro ခြောက်ဆယ့်လေး
65 sessantacinque sesenta y က cinco
66 sessantasei ခြောက်ဆယ့်ခြောက်
67 မှတ်တမ်းစာအုပ် ခြောက်ဆယ့်ခုနစ်
68 ဆီဆန်တိုတို ခြောက်ဆယ့်ရှစ်
69 sessantanove ဖြစ်သည် ခြောက်ဆယ်ကိုး
70 ဆက်တန်တာ ခုနစ်ဆယ်
71 settunno ခုနှစ်ဆယ့်တစ်
72 အခြေချ ခုနစ်ဆယ့်နှစ်
73 အခြေချ ခုနစ်ဆယ့်သုံး
74 settantaquattro ခုနစ်ဆယ့်လေး
75 settantacinque ခုနှစ်ဆယ့်ငါး
76 settantasei ခုနစ်ဆယ့်ခြောက်
77 settantasette ခုနှစ်ဆယ့်ခုနှစ်
78 ဆက်တန်တိုတို ခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်
79 အခြေချ ခုနှစ်ဆယ့်ကိုး
81 ottantuno ရှစ်ဆယ့်တစ်
82 ဥတ္တဒူး ရှစ်ဆယ့်နှစ်
83 ဥတ္တရ ရှစ်ဆယ့်သုံး
84 ottaquattro ရှစ်ဆယ့်လေး
85 ottacinque ရှစ်ဆယ့်ငါး
86 ottantasei ရှစ်ဆယ့်ခြောက်
87 ဥတ္တရတိ၊ ရှစ်ဆယ့်ခုနစ်
88 အော့တန်တိုတို ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
89 ottantanove ရှစ်ဆယ့်ကိုး
90 နိုဗန်တာ ကိုးဆယ်
91 နိုဗန်တူနို ကိုးဆယ့်တစ်
92 novantadue ကိုးဆယ့်နှစ်
93 အိပ်ရာထလို့မရဘူး ကိုးဆယ်သုံး
94 novantaquattro ကိုးဆယ့်လေး
95 အဲဒါကိုမရုတ်သိမ်းဘူး ကိုးဆယ့်ငါး
96 မထဘူး ကိုးဆယ့်ခြောက်
97 novantasette ကိုးဆယ့်ခုနှစ်
98 နိုဗန်တိုတို ကိုးဆယ့်ရှစ်
99 novantanove ကိုးဆယ့်ကိုး
ဒါကြောင့်မင်းဒီနံပါတ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမြဲရှာနေစရာမလိုဘူး၊ မင်းကပုံကို download လုပ်ပြီးအဲဒါကိုပုံတစ်ပုံရဲ့ပုံစံနဲ့စားပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ သင်နှင့်အတူအမြဲဆောင်ထားပါ။
ဆယ့်တစ်မှ ၁၆ အထိဂဏန်းများကိုအမြစ်၏နောက်တွင်ဆယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်: တကျိပ်တပါး (11), တကျိပ်နှစ်ပါး (၁၂) ာ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဆယ့်ခုနှစ်မှဆယ့်ကိုးအထိအမိန့်သည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပထမကိုဆယ်ခုထားပြီးမှယူနစ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်: diciasette (17), diciotto (18) နှင့် သူတို့က ဆန်းသစ်တယ်။ (19) ။
ဆယ်ဂဏန်း၏ကိစ္စတွင်ကိန်းဂဏန်းများစာရင်း၌တွေ့ရသည့်အတိုင်းဆယ်နှင့်နှစ်ဆယ်ကိစ္စ မှလွဲ၍ တိကျသောအမည်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပေါင်းဂဏန်းများတွင် ၁၀ နှင့်အဆုံးကို ပေါင်း၍ သရအက္ခရာတစ်လုံးကိုသရအက္ခရာတစ်ခုကဲ့သို့သရအက္ခရာတစ်လုံး၏အစတွင်အက္ခရာတစ်လုံး၏အဆုံး၌ ၁၀ ဟုခေါ်သည်။ သို့မဟုတ်ရှစ် ဥပမာအားဖြင့်: ဝမ်းသာပါတယ် (21), တဲ (၃၂) ာ၊
ရာပေါင်းများစွာကိုစာလုံးတစ်ရာကိုအမြှောက်နံပါတ်ဖြင့်ရှေ့ဆက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်: နေပြည်တော် (200), trecento (၃၂) ာ၊
အီတလီမှ ၁ မှ ၁၀ အထိဂဏန်းများကိုအသံထွက်ရာတွင်ကူညီပေးမည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သင်ကြားသည့်အသံများကိုပုံတူပွားနိုင်ရန်အီတလီဇာတိကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မရ။ နောက်တစ်ခု:
မဟုတ်သောc'è due senza tre, il quattro vien da sè
များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအတိုကောက်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည် "မဟုတ်သေးဘူး senza tre"မရ။ စာသားအရဆိုလိုသည်မှာ“ သုံးယောက်မရှိလျှင်နှစ်ယောက်မရှိ၊ လေးယောက်ကသူတို့ဘာသာလာခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုလိုသည်၊ ကောင်းသည်ဆိုးသည်များသည်တစ်ချိန်လျှင်သုံးကြိမ်လာလေ့ရှိသည်။
မင်းရဲ့သော့တွေပျောက်သွားတယ်၊ မင်းရဲ့ကားဘက်ထရီကိုချေမွပစ်လိုက်၊ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဖိနပ်တစ်စုံကျိုးသွားတယ်။ "Non c'è due senza tre" မျက်မမြင်နေ့သုံးကြိမ်ဆက်တိုက်လား။ “ မဟုတ်သေးဘူး၊ မင်းနောက်ထပ်ချောကလက်စားဖို့ဆင်ခြေတစ်ခုလိုသလား။ "မဟုတ်တာကြောင့် senza tre!" ဆယ်ဂဏန်း၊ ရာနှင့်ချီသောသူများတွင်နေရာမရှိပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာသတိရပါ။ ၎င်းတို့ကိုစကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်.
ဒါကအားလုံးပြီးပါပြီ၊ ငါတို့အတွက်မင်းကအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ မင်းမှာမေးခွန်းတွေရှိရင်မင်းထင်မြင်ချက်ပေးနိုင်တာနဲ့ငါတို့မင်းကိုအမြန်ဆုံးကူညီဖို့ကြိုးစားမယ်။
categories ဘာသာစကား, အီတလီ လက်မှတ်အညွှန်း
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » အီတလီ » အီတလီနံပါတ် ၁ မှ ၁၀၀ အထိ
“ အီတလီရှိနံပါတ်များမှ ၁ မှ ၁၀၀ အထိ” မှတ်ချက် ၁ ခု
စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၀ နံနက် ၉ နာရီ ၁၆ မိနစ်
ငါအီတလီကိုကြိုက်တယ်၊ ငါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ San Josè de San Cristóbalခရိုင်၊ Táchiraပြည်နယ်၊ San Al Josio ရဲ့သင်တန်းမှာသင်ယူနေတယ်။ မင်းရဲ့အချက်အလက်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်